Shuruudaha horyaal Shirka Xalane | KEYDMEDIA ONLINE
Shuruudaha horyaal Shirka Xalane
Lix qodob oo xasaasi ah ayaa la sheegayaa in ay ku hor-gudban yihiin shirka Xalane ku dhex mari lahaa madaxda dowladda Dhexe iyo kuwa dowad goboleedyada
MUQDISHO, Soomaaliya - Shuruudaha Shirka Xalane ku hor gudban ayaa lagu tilmaamay in ay ugu muhiimsan yihiin lix qodob oo xasaasi ah, kuwaasoo ka imaanaya madaxweynayaasha dowlad goboleedyada diiddan jiritaanka Farmaajo ee Puntland iyo Jubbaland.
In amniga goobta shirka la sugo, islamarkaana Madaxweyne Farmaajo ciidankiisa ka saaro si loo helo kalsooni amni iyo wadahadal caafimaad qaba.
In madaxweyne Farmaajo uu mas’uuliyadaha qaarkood ku wareejiyo Ra’iisul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble, kadibna isaga oo mushrrax ah uu ka qaybgalo hawlaha tartanka doorashada.
In hogaaminta shirka loo dhiibo beesha caalamka maadaama uu dhamaaday muddo xileedka Madaxweynaha islamarkaana uusan laheyn sharciyad uu ku hogaamiyo, ama hoggaan la iska dhex-doorto balse ay goobjoog ka ahaadaan beesha caalamka oo dammaanad qaad ka noqday fulinta waxa lagu heshiiyo.
In laga tala-geliyo Ajandaha shirka oo xalay shaacisay Villa Somalia iyadoo aan kala tashan maamulada kale ee dalka, gaar ahaan madxweynayaasha Puntland iyo Jubbaland oo iyagu diiddan qodobada ay Villada iska soo xarriiqaneyso.
In shaqada laga joojiyo taliyayaashii ku lugta lahaa weerarkii lagu qaaday mucaaradka 19-kii February.
In wada-hadallada shirka laga qeyb geliyo Mucaaradka iyo Aqalka Sare si xal loogu helo dhamaan tabashooyinka Soomaaliya.
Qodobadaas oo u muuqda dhammaantood xujiiyin ka imaanaya Deni iyo Madoobe ayey ku adagtahay inuu aqbalo madaxweynaha muddo xileedkiisu dhammaaday ee Farmaajo kaasoo weli isku kooleynaya xilka meertada ah ee afartii sanaba mar doorashada loo galo ee Madaxweyna -nimada Soomaaliya.
Ismari waaga siyaasadeed iyo isu tanaasul la'aanta ka taagan gudaha siyaasiyiinta ku loolamaya xilka ugu sarreeya dalka waxay keeni kartaa dib-u-dhac hor leh, waxaana laga yaabaa in Beesha Caalamku qaadato go'aan qaraar oo aan u cuntameyn labada dhinac, sharaf ahaana ay ku dhimaneyso sumcadda iyo sharafka umadda Soomaaliyeed.